Iividiyo ezikumaphepha okufika zonyusa ukuguqulwa nge-130%
Ukufika kwiphepha leVidiyo kwandisa ukuGuqula iipesenti ezingama-130%
NgeCawa, uJuni 13, 2010 NgeCawa, ngoJulayi 27, 2014 Douglas Karr
Sele kukho amanani anyanzelisayo evidiyo inyusa amazinga okuguqula kwii-imeyile ngama-200% ukuya kuma-300%. Ividiyo iqala ukudlala indima ephambili kuwo onke amajelo entengiso. Immax yinkampani yophuhliso lwewebhu enegama elinye le iinkampani zentengiso eziphambili elizweni.
Ndithetha noRyan Mull kwaye wakhankanya ukuba baqwalasele ukuphucuka okuphawulweyo kwinqanaba lokuguqula unikezelo lwabathengi babo xa bebandakanya iividiyo ezikumgangatho ophezulu kwiphepha lokufika.
Iindaba ezimnandi zezi, idatha icacile, kwaye idathasethi inkulu ngokwaneleyo ukuba ibonise iziphumo zokwenyani. Ngokongeza ividiyo kwiphepha lokumisa le-SEM / PPC, umthengi wabona ukwanda kwe-130.5% kwizikhokelo eziveliswe kwiphulo. ngoRyan Mull, Imavex
I-Imavex ikhuphe iqonga lokusingatha ividiyo, Umjongi, ukuba basebenzisa ukusingathwa kunye nokuhambisa ezi vidiyo zikumgangatho ophezulu.
Iindleko zevidiyo ezixutywe kakuhle kwiwebhu zinokwahluka kumaxabiso. Kukho izixhobo ezimbalwa zevidiyo ezinokwenza iividiyo ezingaphantsi kwe- $ 1,000 nganye. Iividiyo zobungcali ezingaphezulu zinokubiza i-2,500 yeedola nangaphezulu-kodwa ukuba uyanda ngokuguqula nge-130%, ayithathi lukhulu ukufumana imbuyekezo elungileyo kutyalo-mali!
tags: izinga lokuguqulwayandisa utshintshoiphepha lokufikamaphephaIiVidiyo zeNtengisoamazinga okuguqulwa kwevidiyo
I-WordPress 3.0-Andikwazi kulinda!
Soloko uzisa umlo ekhaya
Jun 14, 2010 ngo-9:01 AM
Kubuhlungu, kodwa kuyinyaniso kwinto endiyibonileyo.
Nkqu nobungakanani, umlinganiselo wembonakalo, kunye nokubekwa kwindawo kwenza umahluko...impazamo, ndiyaxelelwa
Juni 14, 2010 ngo-1: 12 PM
Ngaba ungabelana 'ngezixhobo zevidiyo zasekuhlaleni' ozikhankanyayo? Ndijonge ukwenza ividiyo eninzi engafumani abathengisi abafanelekileyo.
Juni 14, 2010 ngo-2: 10 PM
Wowu! Ngubani ovelise le vidiyo? Ndingathanda ukudibana nabo. Ngaba umntu angandazisa?
Jun 15, 2010 ngo-10:49 AM
Apha e-Indianapolis, izixhobo zevidiyo ziyi-Imavex (http://www.imavex.com), Icantaloupe (http://www.cantaloupe.tv), Olunye Uyilo olupholileyo
Imidiya yeenkwenkwezi (http://12starsmedia.com) ekuhlaleni – bonke benza umsebenzi omhle kwaye bayahluka ngokwamaxabiso nemveliso.
Oktobha 20, 2014 ngo-2: 50 PM
Ndisebenzela i-arhente yevidiyo echazayo yaseToronto ebizwa ngokuba yiLaunchSpark Video, kwaye siye safumanisa ukuba ayipheleli nje ekuncedeni ividiyo ekunyuseni intengiso kubathengi bethu, kodwa ikwasebenze njengesixhobo esikhulu kwisicwangciso sabo sokuvelisa isizukulwana ngokubanzi. Uninzi lwabathengi bethu basebenzise iividiyo zabo zokuchaza kwiimiboniso zorhwebo kunye neenkcazo ngokunjalo, kwaye ngokunika abaphulaphuli umboniso okhawulezayo wemveliso / inkonzo yabo, iguqule abo babukeli ukuba babe ngabakhokeleyo. Ukukwazi ukuphumeza ngokulula nangempumelelo ividiyo kwiitshaneli ezininzi yenye nje into eyenza ibe sisixhobo esikhulu sokuthengisa!
Okt 21, 2014 ngexesha 2:04 AM
Iividiyo ezintle, Fabio!